Alaabada Apple | Xogta IPhone (Bogga 13)
IPad Mini 4 wuxuu ruxaa shaashadda kaniiniga ugu fiican abid
Shaashadda iPad Mini 4 waxay muujineysaa 2% milicsi, waxtar aan horay loo arag shaashadda kiniinka illaa maanta.
WatchOS 2 ayaa hadda baxay. Sida loo rakibo Apple Watch-kaaga
Sida loo soo dejiyo loona rakibo WatchOS 2 Apple Watch-kaaga
Tani waxay ahayd furitaanka Dukaanka Apple ee Brussels [muuqaal]
Fiidiyowgaan wuxuu na tusayaa furitaanka Dukaanka Apple cusub ee Brussels, oo la yimaada waxyaabo badan oo muhiim ah gudaha.
Apple Watch wuxuu caawiyaa badbaadinta nolosha dhalinyarada
Apple Watch wuxuu caawiyaa badbaadinta nolosha dhallinta oo si lama filaan ah oo naxdin leh ku dhammaan lahayd.
tvOS, waa fursad cusub oo barnaamij
Apple TV-ga cusub iyo barnaamijkiisa tvOS wuxuu fursad cusub u siiyaa dadka wax horumariya ee leh dukaankooda cusub ee barnaamijka.
Kii ugu horreeyay ee jiilka cusub ee Apple Stores ayaa ka furmay Brussels
Shalay Dukaanka Apple ee Brussels wuxuu sameeyay furitaankiisa rasmiga ah, kan kaliya ee Beljim waana kan ugu horreeya dukaamada jiilka cusub ee uu naqshadeeyay Jonny Ive.
Sida inbadan oo idinka mid ah durba ogtahay, Apple waxay ku dhawaaqday kororka keydinta keydka inta lagu gudajiray muxaadaradii ugu dambeysay ...
Apple wuxuu sii daayaa iTunes 12.3 Iyada oo la jaanqaadaysa iOS 9
Apple ayaa sidoo kale maanta sii deysay iTunes 12.3 iyada oo taageerta OS X El Capitan iyo iOS 9, iyo sidoo kale xaqiijin laba-tallaabo ah.
Sida loo kaydiyo Apple Watch-kaaga
Waxaan kuu sharxeynaa nidaamka si gacan kayd ah loogu sameeyo Apple Watch-kaaga iPhone-ka.
Furashadii ugu horreysay ee Apple TV 4
Haddii aadan arkin, sanduuqii ugu horreeyay ee Apple TV 4 hadda waa la heli karaa.Hadda, sanduuqa wuxuu ka samaysan yahay bir
Siri Remote waxaa laga heli doonaa oo keliya 8 dal
Markan waxaan haynaa war wanaagsan oo ku saabsan waddammadii ugu horreeyay waana taas in Siri Remote lagu heli doono Isbaanish
Ka eeg Apple Watches Sport Gold iyo Rose Gold muuqaalkan
Fiidiyowgaan waxaan ku arki karnaa meel u dhow waxa labada midab ee cusub ee Apple Watch Sport ay soo galaan runtii yihiin.
Apple TV wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo dejiso ciyaaro ka badan 200 MB
Warka sheeganaya xaddidaadda 200MB ee ciyaaraha ee Apple TV ayaa ugu dambeyntii la caddeeyay: waxaan rakibi karnaa ciyaaro leh xaddiga 2,2GB.
Kaamirada + waxay noqoneysaa bilaash lacag bixinta isku dhafan
Codsiga kamaradaha caanka ah ee caanka ah ee iPhone s ayaa dib ugu soo laabtay bilaash iyo lacag isku dhafan.
Apple TV-ga cusub wuxuu tirtirayaa soo saarida maqalka indhaha laakiin wuxuu la yimaadaa Dolby 7.1
Daabacaadda cusub ee Apple TV-ga ayaa cabudhisay wax soo saarka maqalka ee indhaha ee horay loogu riyaaqay, hadda waxaa suurtagal ah oo keliya in lagu soo saaro Dolby 7.1 HDMI.
Ugu dambeyn Apple TV-ga cusub ma taageerayo 4K
Ugu dambeyntiina, in kasta oo xaqiiqda ah in iPhones-ka cusub lagu duubay 4K, aaladda TV-ga Apple TV ma ciyaaro nooca noocan ah, ugu yaraan hadda
Waxaad horey u ogtahay inta RAM uu leeyahay Apple TV 4: 2GB
Waad ku mahadsan tahay dukumiinti laxiriira tvOS, horeyba waa loo ogaa inta RAM wanaajinta ee Apple TV 4 leeyahay oo leh xasuus la aqbali karo, in kastoo ay horumarin karto.
Apple TV-ga cusub wuxuu noqdaa xarun warbaahin fara badan iyo konsolloor ciyaarta ah
Apple TV-ga cusub waa konsolle cusub oo ciyaarta lagu ciyaaro iyo xarun warbaahin fara badan oo ku dhex jirta hal aalad oo leh kontorool horumarsan oo keliya $ 149
Qiimaha Apple TV 4. Jiilka saddexaad wuxuu ilaaliyaa qiimahiisa
Shalay Apple waxay soo bandhigtay Apple TV 4 warar badan oo xiiso leh. Waxaan u maleyn karnaa in qiimaha uu noqon lahaa mid sareeya, laakiin maahan.
Steve Jobs ayaa ugu yeeray joornaalada fashil aad u weyn sanadkii 2004
Steve Jobs wuxuu shaaca ka qaaday 2004-tii in qaab-dhismeedyadu mustaqbal lahayn oo ay fiicnayd in la bilaabo. Maxaa iska beddelay Apple si loo soo bandhigo qalinka Apple?
Sida loo arko muxaadarada Apple ee Windows, Android iyo Linux
Waxaan ku tusineynaa sida aad ula socon karto furaha Apple ee Windows, Linux ama Android, adigoo ka gudbaya xaddidaadda Apple ee Safari
Waxaan isku tuurayaa barkada anoo wata saadaalin shaqsiyadeed oo ku saabsan waxa aan arki doono galabta oo ku saleysan maqal iyo caqli gal, rajo yar.
Waxaan dul istaageynaa sheekada asalka Suuriya ee aasaasaha Apple Steve Jobs, asal ahaan reer Siiriya ah oo ay tahay inuu naga dhigo inaan ka fikirno riwaayadaha bani'aadamnimada ee Suuriya.
Sida looga nadiifiyo alaarmiga Apple Watch-kaaga
Waxaan kuu sharaxeynaa laba habab oo kala duwan oo looga saari karo alaarmiga Apple Watch-kaaga
Samsung Gear S2 wuxuu la jaan qaadayaa iPhone-ka
Samsung ayaa dhawaan bilaabi doonta codsi si aaladaha leh Tizen, sida Gear S2, loogu isticmaali karo iPhone-ka
Daabacaadda cusub ee Apple TV waxaa la soo bandhigi doonaa 9-ka bisha Sebtember, waxaana la socon doona processor-ka Apple ee A8 oo qiimahiisu yahay $ 149.
Hadda oo Android Wear uu la jaan qaadayo iPhone-ka, miyaad iibsan doontaa Apple Watch ama smartwatch oo leh nidaamka Google? Waxaan xallinaynaa shakigaaga.
Apple TV 4, oo la soo bandhigi doono isbuuca soo socda, lana iibin doono bisha Oktoobar, ayaa la jaan qaadi doona kontoroolka loo yaqaan 'Bluetooth'. Ma noqon doonaa konsolkeena?
Apple waxay kala xaajootaa shirkadaha wax soo saarka khidmadda bil kasta ee Apple TV
Apple waxay gorgortan kula jirtaa shirkadaha wax soo saarka ee ku saabsan qiimaha bil kasta loogu qoro adeeggeeda telefishanka cusub ee internetka, oo ay soo bandhigi doonto 9-ka.
Apple waxay ku dhawaaqeysaa alaabooyin taxane ah oo duugoobay
Apple waxay ku dhawaaqi doontaa inay duugowday badeecooyinka ku jira liiska ee aan ku tusi doono 8-da Sebtember, maalin ka hor inta aan la gaarin qodobka muhiimka ah ee iPhone 6s iyo Apple TV 4.
Soo dejiso waraaqo muhiim ah Sebtember 9
Waxaan ku tusineynaa xiriiriyeyaasha si aad u soo dejiso waraaqaha waraaqaha ee casuumaadaha qodobka xiga ee bisha Sebtember 9, halkaas oo Apple ay ku soo bandhigi doonto iPhones-ka cusub.
Adeegga farsamada ee Apple ayaa hoos u dhigay tayadiisa sida lagu sheegay daraasad dhowaan la sameeyay
In kasta oo Apple waligeedba adeeg farsamo ka haysato kuwa adduunka ugu fiican, haddana warbixin dhowaan ay soo saartay shirkad caan ah ayaa imika lagu qiimeeyay 14.
Mashruucan 'Kickstarter' waxaan ka heli karnaa xargaha Apple Watch-kayga qiimo aad u jaban oo muuqaal qurux badan leh.
Apple waxay daabacdaa ogeysiis cusub oo ku saabsan iPhone 6 iyo Apple Pay
Apple ayaa daabacday ogeysiis cusub oo ka soo baxay shirkadda "haddii uusan ahayn iPhone" taas oo ay uga hadlayso wanaagga Apple Pay
Jilid ayaa u oggolaaneysa adeegsiga macruufka 4 ee Apple Watch.
14-jir horumariye ah Billy Ellis wuxuu ku guuleystey inuu jabsado Apple Watch isagoo adeegsanaya jilitaanka iOS 4. Miyaad ku rakibi doontaa Apple Watch-kaaga?
Muuqaalka hadda wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku furno lifaaqyada Xafiiska
Toddobaad kasta ragga Microsoft waxay ku darayaan shaqooyin cusub dalabka boostada Muuqaalka.
Xarkaha dareeraha ee Apple Watch ayaa imaan kara sanadka 2016
Apple wuxuu ku shaqeyn karaa aaladaha dareemayaasha ee Apple Watch kaas oo sidoo kale imaan kara horaantii 2016
Apple Touts Apple Watch waxay ku rakibtay Ubax Cajiib ah Magaalada London
Gudaha xarunta wax laga iibsado ee London, Apple waxay abuureysaa ubax qurux badan oo cajiib ah si kor loogu qaado Apple Watch.
Swatch waxay la wareegaysaa lahaanshaha weedha quraafaadka ah "Hal shay kale"
Hal-ku-dhigga caanka ah ee uu u adeegsaday Steve Jobs dhacdooyinkiisa iyo soo bandhigidiisa ayaa mustaqbal aan la hubin ku leh Keynotes-ka shirkadda tufaaxa.
Ciladaha nooca cawlan ee Apple Watch Sport
Qaabka cirifka ee Apple Watch Sport ayaa waxyeelo ka soo gaadhay astaanta Apple ee dhabarka. Apple ayaa heleysa cabashooyin
Dhibaatooyinka ku saabsan Apple Watch Sport Space Gray, ka adkaysi yar kuwa kale?
Isticmaalayaasha waxay ka warbixinayaan dhibaatooyinka xagga dambe ee Space Gray Apple Watch Sport.
Waxaan horeyba uheysanay ku dhawaaqida loolanka Apple Watch: Gear cusub 2
Kani waa fiidiyowga oo ina tusaya smartwatch-ka soo socda ee shirkadda Kuuriya.
Waxay ku maareeyaan inay jabsadaan Apple Watch si ay u isticmaalaan wicitaannada gaarka ah
Hamza Sood wuxuu ku guuleystey inuu jabsado Apple Watch si uu u adeegsado wicitaano diimeed oo dhaqameed ah, taas oo naga dhigeysa inaan u maleyno in xabsiga loo baahan yahay.
Apple wuxuu bilaabay olole cusub oo xayeysiis ah Apple Music
Apple waxay bilowday olole xayaysiis cusub oo loogu talagalay Apple Music kaas oo aan ku arki karno fannaaniin kala duwan
Apple Pay maahan inuu ka walwalo Samsung Pay
Tikniyoolajiyadda MST ee Samsung ayaa soo daahay, iyadoo Yurub horeyba ugu horumarsaneyd bixinta lacagaha aan lala xiriirin karin isla markaana Mareykanka uu bilaabay isbeddelka
Samsung waxay soo bandhigaysaa Gear S2 cusub, oo ah kii ugu dambeeyay ee smartwatch ah
Samsung waxay soo bandhigtay smartwatch-keeda cusub, Gear S2, oo leh is-dhexgal u eg Apple Watch
Sababaha waxaan u maleynayaa in Apple Music ay ka fiican tahay tartanka
Waxaan ka wada hadalnay aniga iyo lammaanahayga Miguel natiijada ka soo baxda Apple Music bishii ugu horreysay ee nolosheeda, fikradaha waa kala duwan yihiin, ee adigu adaa iska leh?
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa barnaamijka iPod nano
Apple waxay cusbooneysiineysaa nooca cusub ee softiweerka nano ee iPod si ay u taageerto adeegga Apple Music.
Waxaan hadda ka soo kaban karnaa xiriirada, feylasha iyo jadwalka taariikhda laga soo bilaabo iCloud si aan waligeen uga walwalin luminta noocan xogta mar kale
Apple wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo celiso faylasha iCloud ee la tirtiray, xiriirada, kalandarka iyo xusuusinta
Apple waxay soo kordhisay muuqaal cusub oo kuu ogolaanaya inaad ka soo ceshato faylasha la tirtiray, xiriirada, iyo kalandarka laga soo bilaabo iCloud.
Microsoft Word, Powerpoint iyo Excel waa la cusboonaysiiyaa isla waqtigaas
Microsoft waxay go'aansatay inay cusboonaysiiso dhamaan qolkeeda Office-ka isla waqtigaas: Microsoft Word, Powerpoint iyo Excel oo ku daraya isdhexgalka codsigeeda Muuqaalka
Kalluumeysatada waxay soo bandhigeysaa kiiska ugu horreeya ee biyuhu ka galaan Apple Watch
Shirkadda 'Catalyst' ayaa soo saartay kiiskii ugu horreeyay ee biyuhu xireen ee shirkadda Apple Watch. Waxaa lagu qiimeyn doonaa $ 59 wuxuuna bilaabi doonaa rarka bisha Nofeembar.
Apple wuxuu sii daayay Cusboonaysiinta Jiilka 7aad iPod nano
Apple ayaa sii deysay cusbooneysiinta 1.0.4 jiilka toddobaad ee iPod nano iyada oo aan la cayimin wararka iyo sawir la mid ah kii hore.
Ku qubeyso meel kasta oo aad rabto oo leh Apple Watch-gaaga mahadnaqa Hantidhawrka
Shirkadda 'Catalyst' ayaa u soo bandhigtay Apple Watch dacwad ka dhigaysa mid aan biyuhu gelin oo ka ilaalinaysa naxdinta.
Haddii uusan ahayn iPhone ma aha iPhone, ogeysiis cusub oo tufaax ah, ogeysiisyo fiidiyowyo sawiro ah
watchOS 2.0 Beta 5, warar iyo raaxo
Dhowr maalmood ka dib oggolaanshaha watchOS 2.0 beta 5 waxaan haynaa dareenkeenna ugu horreeya
Dib u eegista Loop Milanese ee loogu talagalay Apple Watch
Dib u eegista suunka Milanese Loop ee loogu talagalay Apple Watch, oo ah suun asal ah oo leh dhammeystir aan caadi aheyn qiimo xiiso leh
Navtophoto wuxuu noo ogolaanayaa inaan helno cinwaanka sawirada aan qaadno
Thanks Navtophoto waxaan ogaan karnaa cinwaanka saxda ah ee goobta sawirada aan ku qaadanayno iPhone-keena.
Abuur akoon iTunes App Store ah adigoon lahayn kaarka deynta
Tutorial si loo abuuro xisaab iTunes ah oo aan lahayn kaarka amaahda ee ka socota iPhone, ayaa lagu sharaxay talaabo talaabo ah si aad u ogaato sida loo soo dejiyo barnaamijyada bilaashka ah adigoon bixin.
Suun Apple Watch ah oo jaban? tani waa ikhtiyaar wanaagsan
Waxaan awoodnay inaan tijaabino suun aan asal aheyn oo loogu talagalay Apple Watch oo runtii naga yaabiyay dhamaadka iyo qiimaha.
Barnaamijka Muusigga ayaa si quruxsan ugu soo hagaagay macruufka 9
Template si aad u goyso MicroSIM-kaaga
Soodejiso shaxanka si aad ula qabsato oo aad u gooyso kaarkaaga SIM una beddelo microSIM, oo ah qaab si weyn loogu adeegsado iPhone-ka iyo mobilada kale.
Barnaamijyada ugufiican Apple Watch
Waxaan bixinaa liiska codsiyada ugu fiican ee loogu talagalay Apple Watch
Xulashada Dukaanka App-ka: 15-ka Ciyaar ee ugu xiisaha badan
App Store ayaa soo bandhigay isku soo dubarid cusub oo ciyaaro maalmo ka hor cinwaan looga dhigay: 15-ka kulan ee ugu qosolka badan App-ka
Tilmaamaha ku iman doona barnaamijka YouTube-ka ee iOS
Youtube si dhakhso ah ayaa loo cusbooneysiin doonaa waxayna u keeni doontaa isbeddel qoto dheer shaqooyinka iyo naqshadeynta oo ka caawin doonta adeegsadayaal badan inay sii wadaan ku raaxeysiga arjiga.
Sida Loogu Wareejiyo Liiska Liistada Spotify ee Apple Music
Waxaan kuu sharxeynaa sida loogu wareejiyo liistooyinka Spotify loona wareejiyo Apple Music qaab aad u fudud oo leh MoveToAppleMusic
Liiska dhammaan qalabka ku habboon ee HomeKit
Isticmaaluhu wuxuu ururiyey dhammaan aaladaha xilligan la jaan qaadaya HomeKit wuxuuna ku daabacay bogga internetka
"Barnaamijyada tuubada", ololaha cusub ee xayeysiinta ee Apple Watch wuxuu helayaa seddexdiisa xayeysiis ee ugu horreeya
Apple ayaa daabacday 3 ogeysiis cusub oo ku saabsan Apple Watch, waa seddex ogeysiis oo ku yimid halku dhigga ah "apps at a tub"
Dhibaatada heesaha nuqul ka mid ah ama lumay ee ka yimid Apple Music dhowaan ayaa la xallin doonaa
Sida laga soo xigtay tifaftiraha The Loop, dhibaatada heesaha lumay ama la duubay ee ka yimid Apple Music ayaa lagu hagaajin doonaa muddada gaaban.
Wax soo saarka Apple ayaa Spain ka qaalisan kan Mareykanka, laakiin waxaa ugu wacan canshuuraha la adeegsado.
Apple waxay u oggolaan doontaa soosaarayaasha inay dhexgalaan xeedho-sameeyeyaasha Apple docks docks
Apple Watch ayaa dhowaan awood u yeelan doonta inay xeedho ku darto dekeddeeda iyada oo ay ugu wacan tahay oggolaanshaha Apple ee MFi.
NFL waxay wax ka beddeli doontaa adeeggeeda waxayna imaan doontaa Apple TV 31-ka July iyagoo bixin doona ciyaaro dalab ah xilli ciyaareedka oo dhan
Apple ayaa soo saartay xayeysiis cusub oo iPhone ah oo cinwaan looga dhigay "Barnaamijyo Cajiib ah"
Apple waxay soo bandhigtay xayeysiin cusub, markan si ay u dhiirrigeliso iPhone-ka oo cinwaankeedu yahay "Barnaamijyo Cajiib ah".
iPod Touch ama iPad Mini, midkee la iibsanayaa?
Iibsashada iPod Touch ama iPAd Mini waxaa laga yaabaa inaysan saafi ahayn u fiirsashada tilmaamaha mid kasta.
Arbacadii la soo dhaafay Apple waxay sameysay iPod-kii lixaad iPod. Waxaa la gaadhay wakhtigii lala barbar dhigi lahaa jiilkii hore iyo iPhone 6
IPod Nano iyo Shuffle ayaan la jaan qaadi karin Apple Music
Apple ma ogolaaneyso iPod Nano iyo Shuffle inay ku ciyaaraan muusig laga soo dejiyay Apple Music
iFixit qulqulka jiilka lixaad ee iPod wuxuuna xaqiijiyaa 1GB RAM
Sida had iyo jeer marka qalab elektiroonig ah la soo saaro, iFixit wuxuu horey u sii dejiyay jiilka lixaad ee iPod isagoo xaqiijinaya inuu leeyahay 1GB RAM
Microsoft OneNote waxay soo bandhigtay qalab loogu talagalay Xarunta Ogeysiinta
OneNote waxay soosaartay nooc cusub oo leh warar aad u xiiso badan sida widget xarunta cusub ee ogeysiinta
Waxaan falanqeyneynaa iPod Touch 6G cusub si faahfaahsan
Shalay, iPod Touch 6G cusub, oo ah nooc si weyn loo hagaajiyay oo ka mid ah qalabka macruufka ee Apple-ka, ayaa si aamusnaan leh loo sii daayay.
Jiilka lixaad iPod Touch wuxuu leeyahay 1GB RAM
Dhowr saacadood hadda, jiilka lixaad ee iPod Touch ayaa laga heli karaa khadka tooska ah ee Apple Store oo astaamaha ugu horreeya ayaa horeyba loo yaqaan.
Google Play Kiosko wuxuu hagaajiyaa codsigiisa App Store
The weyn ee G ayaa bilaabay cusbooneysi cusub Google Play Newsstand halkaasoo wararka la xiriira joornaalada iyo qeybta Astaamaha lagu daro
Waxaan kuu sharaxeynaa sida aad uga arki karto ereyada heesaha iPhone-gaaga, iPad-ka iyo xitaa Apple Watch-kaaga.
Waxa aanan ka helin Apple Music iyo waxa Apple ay tahay inay horumariso
Apple Music waxay leedahay wanaag iyo cilado waaweyn. Waxaan soo bandhignay qaar ka mid ah kuwa sida weyn indhaheenna u soo jiitay.
Tani waa sida shaashadda Apple Watch ay u egtahay sawir laga qaaday heerka pixel-ka
Bryan Jones wuxuu sawiray shaashadda Apple Watch ee heerka pixel-ka wuxuuna mowjado ku soo qoray bartiisa gaarka ah. Waa kan sawirada
Kani waa codsigii ugu horeeyey ee aad kula dabaalato Apple Watch laakiin ma awoodi doontid inaad soo dejiso
Kani waa codsigii ugu horreeyay ee loogu talagalay in lagu tababbarto dabaasha Apple Watch lana socdo kal-fadhiyada tababarkaaga ee biyaha hoostooda.
Sida loogu daro muusikada aan ku jirin Apple Music
Apple Music waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku darto muusikada aan laga heli karin buugooda rasmiga ah waana sharxeynaa sida
Tallaabo noocee ah ayaa Apple ka qaadeysaa burcad badeedda waxyaabaha laga soo dejiyey Apple Music?
Caqli ahaan, Apple waxay qaadatay talaabooyin si aanan ugu isticmaali karin waxyaabaha laga soo dejiyay Apple Music bilaa rukun. Waxaan kuu sheegeynaa sida.
Sidee ayuu tallada Apple Music ee "Adiga" u shaqeeyaa
Mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan Apple Music waa "Adiga Adiga", laakiin ma jiro hage loo adeegsado. Waxaan kuu sharraxeynaa sida nidaamkani u shaqeeyo
Sida loo keydiyo heesaha Apple Music dhageysiga qad la'aanta
Waxaan ku baraynaa inaad ka keydiso heesaha Apple Music qalabkaaga si aad uga dhagaysato offline, taas oo ah, qad la'aan.
iTunes waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 12.2 waxaana ku jira is dhexgalka Apple Music
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa iTunes-ka nooca 12.2 waxaana ku jira is-dhexgalka Apple Music. Cusboonaysiin waxyar ka dib dhacda laakiin ka habsaamaysa sidii hore weligeed
Apple Watch wali kama muuqato Qufulka Furaha
Apple Watch wali si sax ah ugama muuqan bogga iCloud Lock Lock
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 8.4 ee ku habboon Apple Music. Waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa dhammaan wararka
Apple ayaa hadda soo saartay macruufka 8.4, oo ah nooc muhiim u noqon doona in lagu raaxeysto adeegga cusub ee muusikada qulqulka, Apple Music.
U dhoofi liiskaaga Spotify-ka (iyo in ka badan) Apple Music
Haddii aad rabto inaad u dhoofiso liiskaaga Spotify iyo kuwa kale Apple Music, dhaqso maxaa yeelay waxaa jira qaab aan rasmi ahayn oo lagu helo
Sida loogu wareejiyo liiskaaga Spotify ee Apple Music
Tallaabooyinkan fudud waxaad ku raaxeysan kartaa liistadaada Spotify ee Apple Music. Actualidad iPad-ka waxaan ku tusaynaa sida.
Nolosha waxtarka leh ee Apple Watch, waa dhibaato marka la iibsanaayo
Mid ka mid ah hubin la'aanta Apple Watch ayaa ah in aynaan ogeyn waxa noloshiisa waxtarka leh ay aakhirka ahaan doonto, sidaa darteed waxaan ku arki karnay moodel cusub muddo gaaban.
Waxaan tijaabinay Apple Watch, smartwatch-ka ugu fiican xilligan
Waxaan falanqeyneynaa Apple Watch, saacadda Apple ee isbeddel ku sameysay suuqa smartwatch, oo leh sawirro iyo fiidiyoow leh dhammaan faahfaahinta
Liiska amarka Siri ee leh HomeKit
Si tartiib tartiib ah ayay Apple u bixinaysaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan barxadda HomeKit
Kuwani waa qiimaha Apple Watch ee Spain
Tilmaam dhammaan qiimaha Apple Watch ee Spain iyo sidoo kale xargaha. Ha moogaanin Apple Watch.
Apple ayaa cusbooneysiisay bogga taageerada ee HomeKit kuna daraya amarrada aan u sheegi karno Siri inay sameyso ficilada
Iibso ama keydso Apple Watch ee Spain, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u iibsato ama u keydiso Apple Watch 26-ka Juun. Ha uga tegin adiga oo aan haysan smartwatch kii ugu fiicnaa ee abid la sii daayo ilaa taariikhda
WALTR, beddelka weyn ee iTunes si loogu fayl galiyo iPhone-ka, hadda sidoo kale Windows
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa isticmaala ee aan awoodin inay galaan iTunes, waxaad xiiseyn kartaa WALTR: uploader iyo beddelaha faylasha multimedia ee iPhone
Apple Music: Wax kasta oo aad uga Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Adeegga Soodhawaynta Muusikada ee Soo socota
Maqaalkan waxaan ku sharxi doonnaa wax kasta oo la yaqaan, iyo waxyaabaha loo maleynayo, ee ku saabsan Apple Music, adeegga muusigga qulqulaya ee imaan doona Juun 30
Toca Life: City ciyaar cusub oo ay ciyaareyso Toca Boca
Toca Boca waxay bilaabi doontaa ciyaar cusub 26-ka Juun: Toca Life City
IPad mini wuu ka baaba’aa Apple Store
IPad Mini-ka ayaa hadda laga waayey bakhaarradii jirka ee Apple iyo kaydka tooska ah ee Apple Store
Apple waxay macaash badan ku kasbataa xarkaha Apple Watch
Apple Watch wuxuu faa iido weyn u keenayaa Apple, laakiin waxay umuuqataa in ganacsiga xargaha ee smartwatch-kaaga sidoo kale muhiim yahay
Apple Watch 2 wuxuu yeelan doonaa kamarad FaceTime ah wuxuuna noqon doonaa mid madaxbanaan
Apple Watch wali ma gaarin dalal badan waxaana durba ka hadlaynaa Apple Watch 2 oo sida wararka la isla dhexmarayo ay ku jiri doonaan kamarad FaceTime ah
Apple Pay waxay sii waddaa ballaarinteeda: waxay ku dareysaa 30 bangiyada cusub ee Mareykanka
Apple waxay ku dartay taageerada 30 hay'adood oo bangiyeed oo dheeraad ah Apple Pay, oo gaadhay in ka badan 300 oo xarumood oo ku yaal Maraykanka.
Apple Music waxay ku soo saari doontaa xoogaa yar, laakiin leh koodh ka wanaagsan
Apple Music waxay ku baahin doontaa bitrate ka hooseeya, 256kbps, laakiin waxay adeegsan doontaa koodh ka wanaagsan, AAC, oo macnaheedu noqon doono tayo la mid ah ama ka wanaagsan MP3 oo leh 320kbps
Dhimasho la sii sheegay: iPod-ku wuxuu bilaabmayaa inuu ka baaba'o Apple.com
IPod-ku hadda kuma haysto qayb u gaar ah apple.con, taas oo caddayn u ah in Apple ay doonayso inay ka dhigto inay baaba'do. Dhawaan ma noqon doonto, laakiin way dhowdahay
watchOS 2 waxay u keentaa Qufulka Furaha Apple Watch
watchOS, nooca labaad ee nidaamka hawlgalka ee Apple Watch, ayaa lagu rari doonaa astaamo amni oo muhiim ah: Qufulka Furaha.
Waxaan si fiican u falanqeyneynaa Apple Music
Apple waxay dooneysaa inay caan ka dhigto Apple Music-keeda cusub ee la sii daayay, kuwani waa furayaasha adeegga muusikada qulqulka ah ee la bilaabi doono Juun 30.
Apple Music waxaa la heli doonaa laga bilaabo Juun 30
Apple Music waxaa lagu sii deyn doonaa in ka badan 100 dal 30-ka Juun 9.99 € XNUMX. Waxaan ka heli doonnaa Isbaanishka iyo Latin Amerika
Apple Watch wuxuu horeyba ugudarey qufulka firfircoonida ee watchOS 2.0
Apple wuxuu soo bandhigayaa watchOS 2 warar xiiso leh
Apple waxay ku soo bandhigtay WWDC 2015 nooca labaad ee nidaamka hawlgalka ee smartwatch, kaas oo badalaya magaca laga bilaabo Watch OS ilaa watchOS 2
OSX El Capitan, nidaamka cusub ee hawlgalka ee Mac
OSX El Capitan waa nidaamka cusub ee hawlgalka ee ka imanaya ragga ku jira guriga, nidaam hawlgal oo diiradda lagu saarayo hagaajinta khibrada isticmaale.
Apple waxay qorsheyneysaa inay si weyn u horumariso kaabayaasha keydinta ee iCloud
Apple waxay maalgashi ku samayn doontaa 3.900 bilyan oo doolar si ay u horumariso kaabayaasheeda iCloud, taas oo u horseedi doonta xawaaraha iyo xasiloonida hagaajinta dadka isticmaala
Sida loo raaco barnaamijka WWDC 2015 ee OS X, iOS, Windows, Android, Linux iyo Apple TV.
Waxaan ku tusineynaa sida aad ula socon karto nuxurka WWDC 2015 ee kombiyuutarka ee leh Windows, Linux ama aaladda Android.
Fantastical, kalandar weyn oo ku yimaada Apple Watch
Codsiga kalandarka Fantastical ee caanka ah ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 2.3 wuxuuna ku darayaa, ugub ahaan ugu muhiimsan, taageerada Apple Watch
Kanaalka National Geographic wuxuu yimaadaa Apple TV
Kanaalka National Geographic wuxuu gaadhay Apple "sanduuqa la dhigay". Haddii aan leenahay Apple TV, waxaan daawan karnaa barnaamijyada, waxyaabaha ku jira iyo gaagaaban mowduucyada ka hadlaya
Apple Pay waxay ku dareysaa taageerada 12 bangi oo dheeraad ah iyo kaararka deynta
Apple Pay waxay ku dartay taageerada 12 bangi oo dheeraad ah iyo kaararka amaahda, in kasta oo imaatinka Yurub ee adeegga lacag bixinta mobilada aan la ogeyn goorta ay imaaneyso
Sida laga soo xigtay Apple, Watch OS 1.0.1 Apple Watch wuxuu isku dayi doonaa inuu cabbiro garaaca wadnaheena 10 daqiiqo kasta laakiin ma sameyn doono haddii gacanta ay dhaqaaqdo
Apple waa shirkadda ugu qiimaha badan adduunka
Apple ayaa ku soo laabatay meesha ugu sareysa liiska shirkadaha ugu qiimaha badan adduunka, iyaga oo ka saaray Google, oo sanadkii hore qabsaday kaalinta koowaad.
Sawirrada Google? Ka sii fiican ka fikir laba jeer ka hor intaadan isticmaalin
Sawirada Google waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku shubato maktabadaada sawirada oo dhan server-keeda, iyadoon laheyn xadka booska oo bilaash ah, laakiin maxaad ku celin kartaa?
Fiidiyowgu wuxuu xaqiijinayaa in Apple Watch lagu soo oogi karo dekedda baaritaanka
Kaydka Kaydka, soo saaraha qalabka, ayaa muujiyay inaad ka qaadi karto Apple Watch dekedda baaritaanka iyada oo faa'iidooyinka qaar laga helayo
Spark, oo ah macmiil cusub oo iimayl u ah iPhone oo dhaqan gala
Readdle ayaa hadda bilaabay Spark, oo ah macmiil emayl aad u fiican oo u imanaya inuu istaago Muuqaalka iyo hal beddel oo dheeri ah oo noqon doona Boostada
Apple waxay soo bandhigi doontaa barnaamij daacad ah, "Abaalmarinta Apple Pay"
Apple waxay qorsheyneysaa inay WWDC ku soo bandhigto barnaamij cusub oo daacadnimo ama abaalmarin ah oo loogu talagalay in lagu hormariyo Apple Pay oo loogu magac daray "Abaalmarinta Apple Pay."
Mar dambe ma awoodi doonno inaan ku aragno fiidiyowyada YouTube shaashad buuxda Safari
Youtube waxay cusbooneysiisay ciyaartoydeeda daalacayaasha, iyadoo ka hor istaageysa dadka isticmaala iDevice inay ku arkaan fiidiyowyada shaashad buuxda
Apple Watch waxay leedahay qalab lagu cabbiro buuxinta oksijiinta dhiigga
iFixit wuxuu helay qalab u ogolaanaya Apple Watch inuu cabiro qadarka oksijiinta dhiiga ku jirta, taas oo u ogolaaneysa inay si sax ah u cabirto
Sida loogu daro istiikarada cusub Telegram-ka iPad-ka
Waad ku mahadsan tahay bulshada isticmaaleyaasha ah, waxaan ku dari karnaa istiikarada ugu dhow mowduuc kasta barnaamijkeena fariinta ee Telegram
Furashada Bir Dahab ah oo Dahabi ku dahaadhan Apple Watch
Maqaalkan waxaad ku arki doontaa fiidiyow ka sameysan biraha dahaarka ah ee Apple Watch ee dahabka ku dahaadhan kaas oo leh dhammeystir aan waxba ka hinaasin asalka
Ku ilaali Apple Watch-kaaga mid nadiif ah talooyinkeena
IPad News waxaan ku siineynaa talo wanaagsan oo ku saabsan sida loo ilaaliyo nadaafadda Apple Watch iyo taxaddar si ay had iyo jeer ugu muuqato mid mudan.
Sida loo soo dejisto NBA Jam si bilaash ah mahad IGN
Waxaan ku tusineynaa talaabo talaabo ah sida loo soo dejiyo ciyaarta NBA Jam si bilaash ah
U rog Apple Watch-kaaga saacad Casio leh kalkuleytar
Ku dheji saacad Casio leh kalkuleytar gacantaada oo leh Geek Watch, oo ah codsi loogu talagalay Apple Watch oo u ekaysiinaya in la yiraahdo saacadda tufaaxa tufaaxa
Kani waa isku-xiraha danabka ee Apple Watch
Kuwani waa faahfaahinta gaarka ah ee ku saabsan isku-xiraha xiisaha badan ee Apple ku hayey sirta ugu adag, soo-socdka iyo Apple Watch.
Sida loo galo dekedda qarsoon ee Apple Watch
Haddii aad horey u ogayd dekedda qarsoon ee Apple Watch ee kordhin karta xawaaraha lacag-bixinta, fiidiyowgan waxaad ku baran kartaa sida loo helo.
Ma rabtaa inaad ku shubato codsi App Store? Haddii "Android" la akhrin karo, ma awoodid
Apple waxay diidday cusbooneysiin codsi ah oo ay ku jirto shaashad aan ku aqrin karno ereyga "Android"
Tani waa sida loo helo dekedda ogaanshaha ee Apple Watch
Markaan daboolka ka qaadno waxaan arki karnaa marin xiriir ah oo shaqaaluhu u adeegsan doonaan howlaha ogaanshaha cudurka ee u dhigma Wakhtiga Aplpe
Shabakada UI8 waxay na siisaa dhowr faylal PSD ah (Faylasha sawirka Photoshop) si aan u habeyn karno isku xirnaanta adeegsadaha ee Apple Watch
Tufaaxu wuxuu diyaariyaa «Find My Watch» iyo TVKit. Apple TV oo leh App Store hortiisa?
Apple waxay diyaarinaysaa laba qalab oo aad muhiim u ah nidaamka deegaanka ee Cupertino: Raadi Daawadayda iyo TVKit. Dukaanka Apple miyuu ka helayaa Apple TV?
Si bilaash ah u soo dejiso in ka badan 200 oo tusaalooyinka Apple Watch ah ee PSD
UI8 waxay daabacday ilaa 200 oo shey oo ka mid ah Apple Watch interface interface oo qaab PSD ah gebi ahaanba bilaash ah oo aan si xor ah ugu isticmaali karno shabakadda
Kuwani waa emoji firfircoon 153 ee Apple Watch
Waxaan kuu soo bandhigeynaa 153 emoji animated ah oo ka mid ah Apple Watch ee GIF si aad ugu isticmaali karto qalab kasta iyo shabakad kasta oo bulsheed.
Sidee looga eegaa batteriga iPhone-ka Apple Watch
In kasta oo saacaddu aysan ku jirin xulashadan asal ahaan, waxaan ku dari karnaa barnaamijyo kala duwan.
Qorshaha dhameystiran ee qaybaha Apple Watch
Haddii Apple Watch ay soo jiidatay dareenkaaga, inaad aragto nidaamka isku dhafan ee ka kooban qeybahiisa iyo sida loogu isticmaalo kooxaha saddexaad ayaa kaa yaabi doona.
Sida loola daawado taxanaha TV-ga ipadka
Codsiyada ugu wanaagsan ee lagu raaxeysto taxanaha telefishanka ee iPad iyo iPhone
Tilmaamahan yar waxaan ku tusineynaa sida loo qasbo in la xiro codsi leh dabeecad qaldan oo ku jirta Apple Watch.
Apple waxay bixisaa liistada aaladaha ay u aragto Vintage iyo Obsolete
Maxaan sameyn karaa Apple Watch-ka la'aanteed iPhone-ka ku xiran shabakadda WiFi?
Apple Watch waa qalab weyn oo leh ballast yar oo loo yaqaan iPhone. Laakiin maxaan ku qaban karnaa kaliya shabakadda WiFi?
Khiyaanooyinka lagu hagaajinayo isticmaalka batteriga ee Apple Watch
Tilmaamaha soo socda waxaan ku tuseynaa dhowr tabaha si batterigaaga Apple Watch uu u sii dheeraado, ku habboon waqtiyada xaaladaha degdegga ah.
Apple Watch: bartilmaameedka xiga ee tuugada
Apple Watch waxay leedahay cillad amni oo halis ah oo u oggolaan doonta tuugada inay dib u dejiyaan oo ay ku lammaaneeyaan iPhone-kooda.
Qalabka falanqaynta ee iTunes Connect ayaa hadda loo heli karaa qof walba
Haddii aad tahay horumariye oo aadan iska qori karin beta si aad isugu daydo aaladda cusub ee Analytics ee Apple, maya ...
Kiiska Apple Watch Epik wuxuu hadda ku jiraa Kickstarter
Kiiska Epik ee ballanqaadaya inuu ku siinayo Apple Watch-kaaga ilaalin dheeri ah ayaa gaartay kala bar ujeedkeeda maalgashiga maalinta ugu horeysa ee Kickstarter.
Waxaan hadda gelin karnaa sawirada Google Docs iyo Slides
Dukumintiyada Google iyo bandhigyada, barnaamijyada noo oggolaanaya inaan abuurno oo aan wax ka beddelno dukumintiyada qoraalka iyo bandhigyada, ayaa hadda ku darey hawsha gelinta sawirrada
Kiisaska ugu fiican Apple Watch
Waxaan dooranay kiisaska ugu xiisaha badan ama daboolka si loo ilaaliyo Apple Watch
Amniga Apple Watch
Apple Watch waxay leedahay lambar amni laakiin ma leh nidaamka kahortaga tuugada ee iCloud.
Apple Watch-kan dahabka ku dahaadhay ayaa umuuqda mid dhab ah oo qiimihiisu ka yaryahay $ 1000
Haddii aadan haysan lacag aad ku iibsato Apple Watch Edition, waxaad saacaddaada ku dhejin kartaa dahab wax ka yar $ 1.000. Beddel weyn oo siinaya garaacista
Nidaamka baaskiilka ee London hadda wuxuu leeyahay barnaamij rasmi ah
Wareegyada 'Santander Cycles' waxay ugu dambeyn bilaabeysaa codsigeeda rasmiga ah ee nidaamka kirada mootooyinka London
Sida loogu daro faylasha fiidiyaha iPad
Waxaan kuu sharraxeynaa sida loogu daro fiidiyowyada iPad iyo iPhone iyada oo loo marayo iTunes dhowr talaabooyin aad u fudud.
Sida ku cad tijaabadii ugu dambeysay, Apple Watch waa biyo-la’aan. Muxuu Apple u qarinayaa?
Sida ku cad tijaabooyinka uu qaaday ciyaartooyga Ray Waker, Apple Watch waa biyo la’aan, taas oo siin doonta shahaado IPX8 ah.Maxay tahay sababta Apple nooga qarinayso?
Shixnadaha goor hore iyo kuwa dambeba: sheekada (naxdinta leh) ee Apple Watch
Wakhtiyada la bixinayo ee shixnadaha Apple Watch waxaa la socda dib u dhac iyo horumarin xagga rabitaanka ah taasoo u muuqata mid ka mid ah bilowgii ugu xumaa.
Sida loo isticmaalo wax kasta oo 22mm ah oo leh Apple Watch
Tilmaame-yari yar oo aan ku tusinno sida loogu beddelo xargaha Apple Watch asalka ah 22 mm kale
Sida Loogu Wareejiyo Maktabada Lugood Computer kale
Tilmaamaha soo socda waxaan ku tusi doonaa sida looga wareejiyo maktabadaada iTunes hal kombiyuutar loona wareejiyo mid kale si marwalba loo habeeyo loona cusbooneysiiyo
Sida loo cusbooneysiiyo nooca iPad-kayga
Waxaan sharxeynaa farqiga u dhexeeya soo celinta iyo cusbooneysiinta, iyo sidoo kale nidaamka labadaba iyo goorta la dooranayo mid ama kan kale.
Waa maxay dammaanadda dhabta ah ee Apple Watch?
Apple waxay diyaarisay warbixin yar oo la socota dhacdooyinka ay qortay damaanada Apple Watch iyo kuwa aysan hagaajin karin
Apple Watch waa sax oo waxay awoodi kartaa inay ka hortagto wadno qabadka
Kormeerka garaaca wadnaha ee lagu soo daray Apple Watch waa mid sax ah oo awood u leh inuu ka hortago wadno qabadka wuxuuna ku dhow yahay inuu helo ogolaanshaha FDA
Sida loo tirtiro heesaha / Albamka iPhone-ka la'aantiis iTunes
Haddii aan dooneyno inaan tirtirno albumka ama heesaha si ka madax bannaan iPhone-keena, waxaan ku sameyn karnaa innagoo ka fogaaneyno inaan marinno iTunes. Waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo.
Sida loogu wareejiyo maktabadaada iTunes kumbuyuutar kale
OS waxaan ku sharaxeynaa sida aan u nuqulan karno maktabada iTunes si aan u sameysano nuqul keyd ah ama aan ugu wareejino kombiyuutar kale
Saaxiibbadaa ma lahan Apple Watch? Dhib malahan. Waxaad ku isticmaali kartaa Digital Touch shisheeyaha
Haddii aad kali ku dareento Apple Watch maxaa yeelay asxaabtaadu wali mid ma lahan, waxaad ku adeegsan kartaa howlaha Digital Touch dadka shisheeyaha ah
Tani waa soo bandhigida bedelka Apple Watch
Haddii aad wax shaki ah ka qabtid sida Apple Watch u imaan doono marka la codsado bedel, adeegsadaha Max Weisel ayaa kaa saari doona shakigaaga sawirradan.
Haddii aad leedahay jiil labaad ama saddexaad Apple TV, kanaallada cusubi waxay u muuqan doonaan kuwo caga juglaynaya saacadaha soo socda.
Apple Pay waxay ku daraysaa 24 bangi oo dheeraad ah liiska bangiyada la taageero iyo ganacsatada, oo ay ku jiraan bangiyada aan muhiimka ahayn. Spain wali kuma jirin liiska.
iFlicks 2 ayaa badalaya fiidiyowyadaada si aad ugu soo dhoofiso iTunes, waadna ku heli kartaa bilaash
iFlicks 2 waa mid ka mid ah codsiyada ugufiican ee loogu badalo filimada qaabka iTunes. Waxaan u tartamaynaa shan shati si aad ugu hesho bilaash.
Imtixaannada ugu horreeya waxay muujinayaan Apple Watch oo aad u sax ah
Tijaabooyinka nooc kasta leh ee lagu sameeyay Apple Watch waxay muujineysaa inay aad ugu saxan tahay raadinta xogta caafimaadka iyo jir dhiska.
Dakadda qarsoon ee Apple Watch waxay u adeegi doontaa inay abuurto qalab wax ku ool ah
Shirkadaha siyaada ah ee Apple Watch waxay rabaan inay ka faa'iidaystaan ​​dekedda qarsoon ee saacadda, sida Kaydka Kaydka.
Apple Watch sidoo kale waxay u adeegtaa inay la wadaagto garaaca wadnaha ilmahaaga dhawaan dhashay
Qofka adeegsada Apple Watch ayaa muujinaya sida uu ugu adeegsado inuu qoyskiisa kula wadaago heerka garaaca wadnaha cunugga uu dhashay.
Apple Watch waxay u keentaa cuncunka maqaarka dadka isticmaala qaarkood
Waxaan haynaa #Gate cusub oo muuqaal ah: Apple Watch wuxuu u keenayaa cuncun maqaarka dadka isticmaala qaarkood. The…
Waalidiintu waxay adeegsadaan Apple Watch si ay ula wadaagaan garaaca wadnaha ilmaha dhashay
Markii ugu horreysay ee Apple ay soo bandhigto Apple Watch bishii Sebtember ee la soo dhaafay, waxay noo sheegtay wax ku saabsan ...
Sida loo habeeyo macluumaadka lagu soo bandhigay Apple Watch
Apple Watch, sidaad ogtahay, waa aaladdii ugu dambaysay ee soo gaadha qoyska Apple. Wuxuu bilaabay inuu gaaro ...
Sida loo helo loona rakibo barnaamijyada Apple Watch
Markaan helno qalab cusub, sida Apple Watch, waxa ugu horeeya ee aan qaban doonno, macquul ahaan, waa inaan isa siino ...
Fiiri astaamaha xaaladda ee Apple Watch
Mid ka mid ah astaamaha ugu waxtarka badan ee Apple Watch waa astaamaha xaaladda ee dusha sare ee ...
Sida loo abaabulo barnaamijyada Apple Watch
Qalab kasta oo moobiil ah oo codsiyada lagu dhejin karo, hal shay oo aan hubaal ka qaban doonno ayaa ah ...
Isboorti ama Bir? Ion-X ama safayr?
Qurxinta safayrku waxay bixisaa iska caabin ballaaran laakiin macdanta 'Ion-X' waxay siisaa tayo muuqaal wanaagsan. Kee la dooranayaa?
Sida loo tirtiro barnaamijyada ku jira Apple Watch
Wax aad ugu badan qalab kasta ayaa ah in la tijaabiyo codsiyada iyo, waxa casharka xiga uu ka qaban doono, ka saar. Marka ...
Sida Music loogu wareejiyo Apple Watch
Haddii aan orod u baxno, ku tababarno qolka jimicsiga ama aan qabanno nooc shaqo, waxaan maqli karnaa muusikada ku kaydsan ...
Apple Watch: Falanqaynta iyo Falanqaynta Muuqaalka
Daahfurka, dib u eegista fiidiyowga iyo falanqaynta Apple Watch ee Isbaanishka, jiilkii ugu horreeyay ee Apple ee smart watch
Dib udhaca gaarsiinta Apple Watch waxaa u sabab ah mashiinka taabashada
Waxaan horeyba uheysanay xaqiijinta sababta dib udhaca alaabooyinka Apple Watch. Waxaa lagu magacaabaa mashiinka taabashada oo waxaa loo sameeyay in lagu ekeysiiyo taabashada
Sida loogu daro saaxiibo Apple Watch
Apple Watch waxay noo ogolaaneysaa inaan u kala dhigno xiriirada ugu badan uguna muhiimsan "Saaxiibada" si aan u helno ...
1 × 23 Podcast ee Actualidad iPad: Waxaan leenahay Apple Watch waana ka jawaabeynaa su'aalahaaga
Toddobaadkan waxaan la hadalnay marti qaas ah, dhegeyste ka mid ah wargeysyadayada oo horeyba u haystay saacaddiisa Apple Watch oo ka jawaabaya su'aalahayaga.
Apple waxay siisaa xalka Apple Watch amarada soo saarida iyo Qiyaasta batteriga iphone
Tiro yar oo "hore korsadayaal ah" oo ka mid ah saacadda Apple Watch ayaa ka warbixinaya dhibaatooyin markii ay ku amraya smartwatch, ...
Sidee loola macaamilaa iTunes
Waxaan ku sharaxeynaa fiidiyowga sida loo abuuro loona soo celiyo keydkaaga iPhone iyo iPad adoo adeegsanaya iTunes.
Sida dib loogu bilaabo Apple Watch
Sidaad la wada socotaanba, Apple Watch wuxuu bilaabay inuu la gaaro macaamiishi ugu horreysay Jimcihii la soo dhaafay, Abriil 24 iyo ...
Wicitaanada fiidiyowga ayaa imanaya Facebook Messenger
Facebook Messenger waxay awood u siisay wicitaanka fiidiyowga iyada oo loo marayo cusbooneysiin barnaamij ah, laakiin maaha in dhammaan waddamada hal mar laga wada hadlo.
Ma jeceshahay suunka Apple Watch-kaaga? Apple ayaa kuu oggolaan doonta inaad ku beddesho bilaash
Xarkaha Apple Watch waa mid ka mid ah dhinacyada aadka looga doodo aaladda, iyadoo la siinayo suurtagalnimada ...
Apple Watch wuxuu saameeyaa batteriga iPhone
Batariga iPhone-ka ayaa si muuqata u dhacaya marka aan ku xirno Apple Watch, taas oo macnaheedu yahay in dad badani ku hungoobi doonaan is-xukunka.
Apple Watch waxay ku gudubtaa imtixaannada Warbixinta Macaamiisha midabbo duulaya
Falanqaynta ay sameysay Warbixinta Macaamiisha ee Apple Watch ayaa saacadda ka dhigaysa mid aad u wanaagsan.
Tijaabada 'TestFlight', tijaabiso barnaamijyada beta ee ku saabsan iPhone-kaaga, iPad-ka iyo Apple Watch
Tijaabinta 'TestFlight' waa barta ay Apple siiso soo-saareyaasha si markaa isticmaale kasta u tijaabin karo codsiyada beta
"Scratchgate" ee Apple Watch iyo xalkiisa
Scratchgate ayaa daadad galiyay baraha bulshada, iyadoo dadka wax iibsanaya ay ku andacoonayaan in saacadooda Apple Watch la xoqay sabab la’aan. Xalka? Aad u fudud oo jaban.
Qurxinta safayr ee Apple Watch ayaa iska caabiya
Warbixinnada Macaamiisha, kan dhinac ka raacay Antenagate-ka caanka ah, ayaa tijaabinaya shaashadda muraayadda safayr ee Apple Watch.
Apple Watch si fudud ayaa loo xoqaa oo si fudud ayaa loo hagaajiyaa
Milkiileyaal badan oo bir ah oo aan lahayn Birta Apple Watch ayaa bilaabaya inay soo dhigaan sawirro muujinaya saacadooda oo si muuqata u waxyeeleeyay xoqitaan.
Waxa ugu fiican usbuuca ee ku jira Actualidad iPhone (XXX)
Hal usbuuc ka badan waxaan kuu soo qaadaneynaa kan ugu fiican Apple iyo iPhone.
Sida loo dejiyo ogeysiisyada ku saabsan Apple Watch
Sidaad wada ogtihiin, mid ka mid ah howlaha ugu waaweyn ee Apple Watch waa inuu naga hor istaago inaan iPhone-ka ka soo baxno jeebkeena ...
Apple Watch waxay dhexgashaa cabir cabir ah, laakiin ma shidna
Saacadda Apple Watch waxay ku dhex leedahay halbeeg cabbira oo kuu oggolaanaya inaad xakameyso xaddiga oksijiinta ee dhiiggaaga ku jirta, laakiin xilligan la shaqeynayo.
Sida loogu beddelo Apple Watch Sport nooc loo yaqaan 'Edition'
Sidan ayaad ku badali kartaa tusaalahaaga Apple Watch Sport oo loo yaqaan 'Edition-color-color'. Dabcan, maahan wax laga xumaado.
Apple wuxuu faahfaahinayaa nolosha batteriga ee Apple Watch wuxuuna cusbooneysiiyaa qaybta xarkaha
Apple waxay cusbooneysiisay qaybta Apple Watch ee ku taal bogga Apple Store iyagoo ku daray faahfaahin ku saabsan nolosha batteriga iyo macluumaadka ku saabsan kooxaha.
Apple Watch iyo vs. Apple Watch Sport: Cayaaraha
Waxaan qiyaasi karnaa. Weli ma aadan go'aansan nooca Apple Watch ee aad dalbaneysid (haddii aad xiiseyneyso), laakiin waan ku caawin karnaa….
Sidee isticmaalka iyo marinka waqtiga u saameyn doonaa nooc kasta oo Apple Watch ah?
Dahab, aluminium iyo bir ayaa ah xulashooyinka ay Apple na siiso saacaddiisa. Waxaan falanqeyneynaa walxaha mid kasta iyo sida ay ugu adkeysan doonaan waqtiga
Bixiyaha Apple Watch wuxuu taageeraa lacag-bixinta wireless-ka
Apple Watch waxay taageertaa Qi-u-dejinta wireless wireless, iyadoo furineysa adduun iswaafajin ah.
Sida loo rakibo barnaamijyada adoo adeegsanaya iTunes
Waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo, loo tirtiro loona wareejiyo barnaamijyada kombiyuutarkaaga adoo adeegsanaya iTunes, oo ay ku jiraan barashada fiidiyowga oo sharraxaya nidaamka
Apple wuxuu soo saaray seddex ogeysiis cusub oo Apple Watch ah
YouTube horeyba waxay u martigalisay seddexda fiidiyow ee cusub ee tufaaxa weyn si loogu dhawaaqo daawashadeeda casriga ah: Apple Watch oo loogu yeero Up, Us and Rise
Pulse Oximeter ayaa laga helay Apple Watch, oo soo jeedinaysa Cabbiraadda Ogsijiinta Dhiigga ee Mustaqbalka
iFixtit wuxuu helay aaladda loo yaqaan 'oximeter' taasoo soo jeedinaysa in saacadda Apple Watch ay awood u yeelan doonto inay mustaqbalka ku cabirto oksijiinta dhiigga ku jirta iyadoo u adeegsanaysa adeeg gaar ah
Sida loo helo buugga isticmaalaha ee Apple Watch
Apple waxay daabacday Buugga Isticmaalka Apple Watch ee qaabka elektaroonigga ah. Waa bilaash in la soo dejiyo oo hadda waxaa laga heli karaa iBooks Store
Waa maxay khasaaraha uu dammaanadda Apple Watch daboolayo?
Waa maxay khasaaraha uu dammaanadda Apple Watch daboolayo? Maxay yihiin faahfaahinta aad tixgeliso inta badan si loogu daro Apple Watch dayactirka dammaanadda?
Sida loo beddelo wajiyada Apple Watch
Apple Watch wuxuu leeyahay wicitaano la isku beddeli karo. Waxaan horeyba u ogayn macluumaadkan inkasta oo aysan si sax ah u jabanayn, maanta waxaan ku tusin doonaa sida loo badalo.
Apple Watch waxay taageertaa Qi lacag-bixinta wireless-ka ah
Apple Watch wuxuu adeegsadaa nidaamka lacag la'aanta ah ee Qi lacag bixinta, heerka warshadaha.
Sidee ayuu u awood badan yahay S1, processor-ka Apple Watch?
Wax yar ama waxba lagama oga processor-ka "S1" ee Apple Watch, markaa waxaan falanqeynay awoodiisa.
Cupertino wali wuxuu diirada saarayaa bilaabida Apple Watch kiiskanna wuxuu nagula yaabay sedex xayeysiis oo cusub oo loogu talagalay smartwatch.
Tijaabooyinkii ugu horreeyay ee iska caabbinta biyaha ee Apple Watch waxay ka yimaadeen Australia
Muran badan iyo jahwareer ayaa ku abuuray Tim Cook qoraalladiisa uu ku sheegayo in Apple Watch ay qubeysan karto ama goorta ...
Barnaamijyada bilaashka ah ee ugu fiican Apple Watch-kaaga
Waxaan doorannaa qaar ka mid ah barnaamijyada ugu xiisaha badan ee bilaashka ah ee la jaan qaada Apple Watch
Sida loo isticmaalo Siri on Apple Watch
Iyada oo tii ugu horreysay ee Apple Watch ay durba gaareen milkiilayaashooda, waxaan u bilownay wareegyo casharro ah. Mashruucan waxaan ku tusineynaa sida loo isticmaalo Siri
iFixit wuxuu kala daadiyaa Apple Watch oo wuxuu ina tusayaa calooshiisa
Tilmaam si aad u kala furfurto Apple Watch oo aad u aragto gudaha Apple smartwatch oo kashifaya qaar ka mid ah sirta sida dekedda lagu ogaado cudurka iyo inbadan.
NightStand: xeedho loogu talagalay Apple Watch oo ku habboon miiska sariirtaada
Shirkadda 'SpeedLab' ayaa hadda soo kordhisay qalab cusub oo loogu talagalay Apple Watch: NightStand, xeedho, kaas oo si fiican ugu habboon miiska sariirtayada.
Apple waxay cusbooneysiin doontaa iPod Touch dabayaaqada sanadkaan
Sida laga soo xigtay ilo ku dhow Apple, nooca casriga ah ee ciyaaryahanka ee ay markii ugu horeysay soo bandhigeen wiilasha Cupertino ...
Thanks to makarafoonka Apple Watch waxaan u isticmaali karnaa inaan ku duubno qoraalada oo aan toos ugu kaydinno OneNote.
Apple Watch wuxuu ka kooban yahay nikkel iyo methacrylates, waa labo shey oo ku siin kara xasaasiyad daran oo maqaarka ah haddii aadan raacin talooyinka qaarkood.
Iska caabinta muraayadda 'Ion-glass' ee Apple Watch Sport ayaa tijaabada la gelinayaa
Muraayadda hore ee muraayadda Apple Watch Sport ayaa laga tijaabin doonaa iska caabbinta xoqida
Apple wuxuu sharxayaa faahfaahinta ku saabsan sida Apple Watch u cabiro garaaca wadnaha
Microsoft waxay kuu ogolaaneysaa inaad u isticmaasho Apple Watch amarka Power Point
Microsoft waxay cusbooneysiineysaa barnaamijkeeda macruufka ah taas oo u oggolaaneysa kadib isticmaalka Apple Watch sida hago fog oo loogu talagalay PowerPoint
PowerPoint waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku xakameyso bandhigyada Apple Watch-kaaga
Cusbooneysiinta cusub ee PowerPoint ayaa u oggolaan doonta isticmaaleyaasha inay xakameeyaan qalabka loo adeegsado iPhone
Kuwa caanka ah waxay sidoo kale xirtaan Apple Watch: Beyonce waxay doortaa daabacaadda Gaarka ah
Daahfurka Apple Watch wuxuu guuleystaa qof walba. Dadka caanka ah sidoo kale waxay xirtaan Apple Watch iyo Beyonce waxay haysaa daabacaadda Gaarka ah.
App-ka YouTube-ka ayaa joojinaya ka shaqeynta qalab casri ah oo iOS ah
Google ayaa hadda ku dhawaaqday isbeddelo cusub oo ku saabsan YouTube-ka API-ga ah oo ku xaddidi doona hawlgalka barnaamijka iOS 7 ama wixii ka sarreeya
Dhowr demo oo lagu sameeyay dukaamada Apple waxay muujinayaan in Apple Watch ay qaadato waqti dheer in la daarto
Tani waa sida kormeeraha garaaca wadnaha ee Apple Watch u shaqeeyo, si faahfaahsan waxaan kuugu sheegi doonnaa iPhone News.
Jailbreak miyuu macno ku sameynayaa Apple Watch?
Wax badan ayaa laga sheegayaa Jeelka Jebinta ee Apple Watch maalmihii la soo dhaafay, laakiin run ahaantii macno ma sameyneysaa?
JAILBILBY macno ma u sameynayaa Apple Watch?
Soo ogow sababaha Apple Watch loo xiri doono iyo nooca u gaarka ah ee 'Cydia' oo leh isbadal lagu hagaajinayo Apple Watch.
Sidee wax badan looga qaban karaa Apple Watch
Apple Watch wuxuu awood u leeyahay inuu sameeyo waxqabadyo kala duwan haddii aan riixno badhanka laba jeer. Midkood ayaa noo oggolaan doona inaan ka boodno inta u dhexeysa codsiyada.
Apple Watch iyo kuwa la tartamaya ayaa fool ka fool u wajihi doona
Waxaan soo aruurineynaa smartwatches-ka ugu fiican xilligan ee iOS iyo Android oo leh astaamahooda ugu muhiimsan.
Kooxaha Facebook ayaa hadda noo ogolaanaya inaan abaabulno kooxaheena
Codsiga Kooxaha Facebook ayaa la cusbooneysiiyay qeybta 11 ee App Store iyadoo lagu darayo suurtagalnimada abaabulka dhammaan kooxahayaga
Video: Muuqaalkii ugu horreeyay ee Apple Watch
Waxaan aadnay dukaanka Apple ee Mareykanka markii ugu horreysay ee aan la kulanno Apple Watch
Maya, Apple Watch Sport kuma imaaneyso iyadoo leh labo xarig
Apple Watch Sport ayaa lagu xaman jiray inuu la yimaado labo xarig. Xaqiiqdii waxay la imaan doontaa suunka saddexda qaybood ah si ay u hagaajiso cabirkiisa
Sida loogu isticmaalo iTunes-ka iPhone-ka iyo iPad-ka: tallaabooyinka ugu horreeya
Qeybta koowaad ee hagaha sida loo isticmaalo iTunes-ka iphone-ka iyo ipad-ka kaas oo aan xiriirkii ugu horreeyay la sameyno arjiga
Beats waxay soo saartay Solo2 Wireless cusub oo u dhiganta midabada iPhone
Beats ayaa sii daayay seddex midab oo cusub oo loogu talagalay qaabkeeda Solo2 Wireless si ay ugu dhigmaan midabada jira ee alaabada Apple.
Tijaabinta iska caabinta dhagaxa safayr ee Apple Watch
Ragga ku jira iPhonefixed waxay tijaabinta u adkeeyeen iska caabinta crystal safayr ee Apple Watch iyo Apple Watch Edition
Ku beddel astaamaha fayllada, barnaamijyada, iyo faylalka kale ee OS X tababarkan fudud.
Sidee ayuu u adag yahay shaashadda Apple Watch? Fiidiyowgaan waxaan ku helaynaa fikrad
Fiidiyowgaan, muraayadda safayr ee daboolaysa shaashadda Apple Watch ayaa lagu qaadayaa tijaabo adag.